Sihlalutya i-Nix headphones ezivela kwiNewSkill | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iikhompyuter, Iziphaluka, Reviews
Ukuba sifuna ii-headphone ezingenazingcingo ukuba zihambe yonke imihla kuloliwe ongaphantsi, ngelixa sihamba nenja, xa sisebenza ... kwintengiso singayifumanar inani elikhulu labo nawo onke amaxabiso. Ukuba sikhetha ezona zinexabiso eliphantsi, ingxaki yokuqala esiza kuyifumana iya kuhlala iyinto yobomi bebhetri, ixesha eliza kuthi ngethamsanqa lifike ngexesha kwaye lincinci, ukuba lifikile.
Enye ingxaki esiza kuyifumana ngolu hlobo lwee-headphone ezingabizi, ngumgangatho wesandi, isandi esenziwe enkonkxiweyo esingasivumeli ukuba sonwabele umculo esiwuthandayo ngesandi esaneleyo, singasathethi ke ngomthamo opheleleyo. Ukongeza, ngamanye amaxesha iplastikhi esetyenziselwa ukubeka iseti yentloko ngaphakathi endlebeni ikumgangatho ombi kangangokuba ayisinyanzeli ukuba siyikhuphe kwakhona. Konke oku akwenzeki ngeNix yeNewSkill.
Isixhobo sezinto eziluncedo kubadlala umdlalo, sisungule ii-headphone ezingenazingcingo ezijolise kuphela kolu hlobo lomsebenzisi, kodwa zinokusetyenziswa nangubani na onesidingo sokuthenga ii-headphone zolu hlobo, jonga umgangatho kodwa ungafuni ukuchitha isidenge sokwenene kuzo. Ii-headphone ze-Nix ezivela eNewSkill zii-headphone ezilingana nendlebe kwaye eziqhotyoshelwe endlebeni, zilunge ngokugqibeleleyo kuyo ukuze nangayo nayiphi na intshukumo yequbuliso ingashukumi kwaye siwe.
Ezi ntloko, ayenzelwanga kuphela abadlali, kodwa iNewSkill iye yafuna ukwazisa imveliso eqhubela phambili, kwaye isinika ukhuseleko ngamanzi kunye nokubila, ukuze sikwazi ukuzisebenzisa zombini ekhaya, esitratweni okanye xa siphuma sibaleka okanye sisiya ejimini, siba ii-headphone zomhlaba wonke kuyo nayiphi na into oyisebenzisayo mihla le.
1 I-Nix yeNewSkill kusuku nemini
2 Ukuzimela kweNix nguNewSkill
3 Imixholo yebhokisi
4 Ukucaciswa kweNewSkill Nix
I-Nix yeNewSkill kusuku nemini
Emva kokuvavanywa kwabo nzulu, i-Nix ziye zaba ziintloko zam zentloko xa kuziwa ekuphumeni ukuya kuzilolonga, ukuhamba nenja, xa ndisenza imisebenzi yasekhaya okanye ngokulula xa ndifuna ukonwabela imovie okanye umdlalo endiwuthandayo. Ngombulelo kwitekhnoloji ye-Ultra-bass edityanisiweyo, sonwabela ii-bass ezilungileyo, nangona ngamanye amaxesha isandi sinokushiya kancinci ukuba sinqweneleke, ngakumbi xa ibhetri sele iza kuphela.
Ndiyabulela umbhobho edibeneyo Ukuphendula rhoqo, xa sizisebenzisa ukonwabela imidlalo esiyithandayo kwi-intanethi, abadlali beqela lethu baya kusiva ngokucacileyo nangokucocekileyo, ngaphandle kokugqwetha. Ukudityaniswa kwemakrofoni kulawulo olulawula ivolumu, kusivumela ukuba sizisebenzise ukwenza okanye ukufumana iifowuni ngelixa sizisebenzisa.
Intambo edibanisa zombini ii-headphone, singaziphatha zombini ngaphambili nangasemva kwentamo, indawo yokugqibela ikwindawo ekucetyiswa kakhulu kuyo xa siza kuhamba ngexesha lokusetyenziswa. Enye yezinto ezi Kuya kufuneka ndiphucule ukuthungwa kwamaqhosha okucima / okucima kunye nolawulo lwevolumu, Ubume obuya kwahluka, ukuze ube nakho ukwahlula ngokuthinta kwaye ungagqibi ukucima ii-headphones ixesha elininzi endaweni yokunyusa ivolumu.
Ezi headphone azinayo inkqubo yokurhoxisa ingxolo, inkqubo edla ngokwenza ukuba ixabiso lolu hlobo lwee-headphone libize kakhulu, nto leyo esivumela ukuba sazi ingxolo esirhangqileyo ngalo lonke ixesha ngaphandle kokuphazamisa okanye ukusiphazamisa xa sisebenzisa kubo, ukuze ngekhe sahlukaniswe ngokupheleleyo nokusingqongileyo.
Ukuzimela kweNix nguNewSkill
Ngokomenzi, I-Nix isinika iiyure ezingama-6 zokuzimela, yenye yemiba endiyithathela ingqalelo ngokukodwa xa ukhetha ii-headphone zolu hlobo, ukongeza kumgangatho ngokucacileyo. Ukuhlawulisa zombini i-smartphone yam kunye ne-smartwatch yam rhoqo ebusuku kuye kwaba ngumsebenzi oqhelekileyo apho andifuni ukuba ndidibanise i-headset ye-bluetooth.
Ngale ndlela, nasemva kokwenza uvavanyo oluninzi, ndikwazile ukungqinisisa, njenge I-Nix ifikelela ekuzimeleni ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-5, uzisebenzisa zombini ukumamela umculo kunye nokumamela ipodcast kumthamo ophakathi. Into endiyiqapheleyo kukuba ukuzimela kuncipha ngokuxhuma kunye nemida, xa umculo siwubeka kwelona nani liphezulu, into exhaphakileyo kuzo zonke ii-headphone zolu hlobo, kodwa kule meko kubonakala ngathi itsala umdla wam ngenxa yokutsalwa kwebhetri ukubandezeleka.
Kodwa ke, kuthathelwa ingqalelo ukuba iimeko apho umculo womculo endiwumameleyo ucacile, kuba yingoma ekhethekileyo okanye sikwindawo apho kukho ingxolo engasemva kunesiqhelo, le ngxaki akufuneki sikhathazeke Ngaphandle kokuba sibengomnye wabo basebenzisi abathanda ukuhlala benomculo kwimpompo, abasebenzisi endincomela kubo ii-headphone ezinentambo.
Olu hlobo lwee-headphone isinika ubukhulu beepads ezahlukeneyo ukuze zilingane ngokugqibeleleyo ezindlebeni zethu nokuba kwimizuzu yokuqala yokusetyenziswa, iindlebe zethu azipheli zibuhlungu, nokuba kungenxa yokuba iipads zikhulu kakhulu, okanye ngenxa yokuba sibancinci siva ingxolo evela esitratweni kunomculo esiwuthandayo. Ibhokisi ikwasinika nemeko encinci yokuhambisa ii-headphones ngendlela elula ngakumbi, ii-headphone ezinemagnethi ngasemva, sinokuzithwala ngokugqibeleleyo entanyeni ebotshelelwe ngokungathi sisangqa.
Ngale ndlela sihlala sinazo, kwaye zidwelisiwe ukuzisebenzisa kwimeko apho ufuna ukuzisebenzisa kwakhona. Ikwabonelela ngeebhendi zerabha ezinobungakanani obahlukeneyo ukuze ii-headphone ziqhotyoshelwe endlebeni kwaye asiqondi ukuba sizinxibile. Sikwafumana ikhebula le-microUSB ukuhlawulisa ii-headphone, kunye nokuqeshwa kweNewSkill ukubamba ii-headphone ukuba asifuni kuzibeka emva kwentamo kwaye sisebenzise inkqubo yemagnethi esinika yona.
Ukucaciswa kweNewSkill Nix
Ibhetri ukuya kwiiyure ezingama-6 zokusetyenziswa.
Ixesha lokuphendula: 20-20000Hz
Ukusetyenziswa okuphezulu: 5mW
Umqondiso kumyinge wengxolo: 93dB
Somlomo ubukhulu: 6mm
Ubude bekhebula: 48.3cm
INewSkill Nix inexabiso nge-39,95 euro kwaye sinokuzifumana ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yomenzi ngokuhambisa simahla, apho sinokufumana khona inani elikhulu leemveliso esizithumela kwiimpuku zomdlalo woluntu, izitulo, iimethi, izixhobo, iikeyboard ...
Newskill Nix Bluetooth IiNtloko
Uphengululo lwe: UIgnacio Sala
Thenga iNix kwiNewSkill
Fit kunye nenkxaso endlebeni
Iqhina ukulawula ivolumu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Sihlalutya ii-headphone ze-Nix ezivela eNewSkill
Ibango leewatchwatches lenyuka ngaphezulu kwe-100% ngeKrisimesi
I-Huawei Matebook D ihlaziywa ngeeprosesa ezintsha kunye nemizobo